समाचार - किन अनुकूलन बाडहरूका लागि औद्योगिक एल्युमिनियम प्रोफाइलहरू छनौट गर्नुहोस्?
टाइम्सको विकाससँगै, धेरै औद्योगिक उपकरण निर्माताहरूले बार तथा उपकरणमा आफ्ना उपकरणहरू र रोबोटहरू हातमा राख्न मनपराउँदछन्, मेशिनरीको सामान्य अपरेशन र स्टाफको सुरक्षालाई बचाउन सुरक्षा अलगाव खेल्छन्। कस्टम बारका लागि औद्योगिक एल्युमिनियमको बारेमा कसरी? यो राम्रो हुनुपर्छ! र धेरै राम्रो! किनभने औद्योगिक एल्युमिनियम प्रोफाइलसँग आधुनिक समझ छ, यो विशेष गरी सरल र प्रयोग गर्न सजिलो छ, र सहायक उत्पादनहरू भेला गर्न सजिलो छ। थप रूपमा, एल्युमिनियम प्रोफाइल नै सफा गर्न सजिलो एन्टी-जंग र एन्टी-रस्टको कार्य गर्दछ। तल हामी एल्युमिनियम प्रोफाइल फेंसको परिचय दिनेछौं, हामीलाई समग्र एल्युमिनियम प्रोफाइल फेंस सम्बन्धित सामग्री र प्रसंस्करण विधिहरू, र अन्य कुरा बुझौं।
औद्योगिक एल्युमिनियम बारको मुख्य फ्रेम सामान्यतया 40०40० र 80०80० हुन्छ। सामान्यतया स्तम्भको कुनामा, शीर्षमा, तनाव पोइन्ट मजबूत ठाउँ 40०80० प्रोफाइल प्रयोग गर्न। परम्परागत लाइन प्रोफाइल वर्ग हो, तैयार उत्पादनहरू ऑक्सीकरण हुन्छन्, सतह चिल्लो हुन्छ। विशेष गरी उद्योग 4.0.० पछि, अधिक र अधिक औद्योगिक कारखाना कार्यशालाहरूमा कार्यशालाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एल्युमिनियम प्रोफाइल फेंसिंग आवश्यक छ।
औद्योगिक एल्युमिनियम प्रोफाइल कस्टम फेंस प्रोसेसिंग को उपयोग, विधानसभा धेरै सुविधाजनक छ, कनेक्शन हिस्सा समर्पित सामान कनेक्शन हो। हामीले केवल पहिलेका डिजाइन गरिएका रेखाचित्रहरू, पंच प्वालहरू र ट्याप तारहरू अनुसार प्रक्रिया गर्नु पर्छ, जुन विशेष गरी सम्मेलनको लागि उपयुक्त छ। बारको तल पनि एक विशेष खुट्टा हो, जुन स्थिर वा सारिन सकिन्छ। विशेष सामानहरूसँग मिलाउन यो विशेष गरी सजिलो छ।
थप रूपमा, अनुकूलित औद्योगिक एल्युमिनियम फेंस सहायक सामग्री चयन, सामान्यतया ऐक्रेलिक, सुरक्षात्मक प्रकाश, फ्लेम retardant बोर्ड, plexiglass र यस्तै। अन्य ग्राहकहरूले 40० बाय black० कालो ग्रिड छनौट गर्नेछन्। जब यी सहायक सामग्रीहरू प्रयोग गर्दै छन्, तपाईं केवल तिनीहरूलाई प्रोफाईलको लागि आरक्षित स्लटमा सम्मिलित गर्न आवश्यक पर्दछ, जुन सहज जडानको लागि उत्तम सुविधाजनक हो।